Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa in xilalka aad la wareegtaan si looga faa’iideysto waqtiga haray”+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa in xilalka aad la wareegtaan si looga faa’iideysto...
Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa in xilalka aad la wareegtaan si looga faa’iideysto waqtiga haray”+Sawirro.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan xubnaha golaha Wasiirada ee maanta la dhaariyay.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka horyaala Golaha Wasiirrada iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ah, si loogu guuleysto ka miro dhalinta qorshaha xukumadda ee ku salaysan ku u adeeggidda bulshadda iyo sareysta sharciga .
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kula dardaarmay Golaha Xukuumadda in si dhaqso ah ay shaqooyinkooda u guda galaan, xilalkana ula wareegaan, si looga faa’iideysto waqtiga haray, loona fuliyo qodobadii ku jiray barnaamijka Xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey.
“Waxaa Alle mahadii ah inaan yeelanay kulankii ugu horeeyey kadib markii maanta la dhaariyay golaha cusub, waxaana idinka rajeynayaa inaad xilalka si deg deg ah ula wareegtaan, si looga faa’iideysto waqtiga haray”.ayuu yiri R/W Maxamed Xuseen.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo golaha shacabka uga mahadceliyay ansixinta Xukuumadda
Next articleIsbitaalka xoogga dalka oo tayadiisa lasii horumarinayo+sawirro.